Dhaabbileen mirga namaaf falman ajjeechaan Itoophiyaa keessatti geggeeffamu qaama walabaan akka qoratamuuf waamicha dhiyeessan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Dhaabbileen mirga namaaf falman ajjeechaan Itoophiyaa keessatti geggeeffamu qaama walabaan akka qoratamuuf...
Dhaabbileen mirga namaaf falman ajjeechaan Itoophiyaa keessatti geggeeffamu qaama walabaan akka qoratamuuf waamicha dhiyeessan
Dhaabbileen ajjeechaan Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiru qaama walabaan akka qoratamuuf waamicha dhiyeessan Amnesty International, Front Line Defenders, the International Federation for Human Rights fi kkf dha.
Ibsi dhaabbileen mirga namaaf falman kunniin gamtaan baasan ajjeechaan, hidhaa fi doorsisaan bal”inaan naannoo Oromiyaa, Amaaraa fi Finfinnetti geggeeffamaa jiru kan hedduu isa yaachise taúu ibsa. Namoonni daandii irrraa guuramaa hidhaman haal duree tokkoon maletti akka gadi lakkifaman gaafata. Badii dhala namaa irratti humna hidhateen raawwatamaa jirus qaamni walaba ta”e tokko akka qoratuuf waamicha dhiyeessa.
”The lack of independent and transparent investigation of human rights violations in Ethiopia strongly implies that the Ethiopian government’s investigation of the ongoing human rights crisis will not be independent, impartial and transparent”
Previous articleDiinagdeen Woyyaaneen hannaa fi saamichaan ijaartee qoqqobbiin akka rukutamuuf sochiin eegalame
Next articleAbbootiin Gadaa Oromoo mootummaa Woyyaanee cimsanii balaaleffatan